ဖြစ်ရလေ ငါ့သမီးလေးရယ်(ခိုးရာလိုက်သွားတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ စာကိုဖက်ပီး အူပါတက်တယ်) – Alanzayar
ဖြစ်ရလေ ငါ့သမီးလေးရယ်(ခိုးရာလိုက်သွားတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ စာကိုဖက်ပီး အူပါတက်တယ်)
သို့ / ချစ်ရပါသော အမေ နဲ့ အဖေ. သမီး ခိုးရာနောက် လိုက်သွားပါပြီ။သမီးကို အဖေနဲ့အမေတို့ ပြုစုနေရမှာ ရှက်ပြီတော့ အားနာလာလို့ပါ။အမေတို့ ဆင်ပေးထားတဲ့ လက်စွပ် ဆွဲကြှိုး လက်ကောက် တွေကို မယူချင်လို့ အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး သမီးမှန်တင်ခုံပေါ်မှာတင်ထားပြီးမှ သမီးတို့ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေရင် အမေတို့ပဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ သမီးအကုန်ယူသွားပါပြီ။
ATM card လေးလည်း ယူသွားတယ် အမေသိတယ်မဟုတ်လားအခုခေတ်က လမ်းခရီးမှာ ငွေကိုင်ရင် အန္တရာယ် များတယ်လေ။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် လို့ အမေတို့ပဲ သင်ပေးခဲ့တာ သမီး မမေ့ဘူး။ သမီး ချစ်သူကလည်း ရိုးရိုးသားသားပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့နော်။ ယောင်္ကျားလေး ဆိုတော့လည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ သောက်တတ်စားတတ် တာပေါ့ အားကစားလည်း သူ ဝါသနာပါလို့ ဘောလုံးပွဲလည်း လောင်းတယ်လေ။
မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့လည်း သူ မရှုပ်ဘူးတဲ့။ ကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ပဲ့ ရှုပ်တာတဲ့။ ဘာပဲ့ဖြစ်ဖြစ် သမီးကို သူချစ်သလို သမီးကလည်း သူ့ကိုချစ်တယ်။သူက ကြင်နာယုယတတ်ပါတယ်။ ဂရုလည်းစိုက်တယ်။ ဟိုနေ့ကဆို သမီးပါးမှာ ခြင်တစ်ကောင်နားနေလို့သမီးကို ခြင်ကိုက်မှာ စိုးရိမ်ပြီသူ့လက်နဲ့ ဖျန်းကနဲရိုက်ပလိုက်တာ သွားနှစ်ချောင်း ကျွတ်သွားတယ်။
မိဘဆိုတာ သားသမီးကို စိတ်ဆိုးလည်း ခဏတဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ရှင်ပညာသာမိ ပြောဖူးတယ်။ မိဘတွေက မြေးမျက်နှာမြင်ရင် အရည်ပျော်ရောတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း အမေတို့အဖေတို့မြေးမြစ်တွေ ပွေ့ချီနိုင်အောင် သမီးတို့ကြိုးစားမှာပါ။
အမေတို့ ဒီစာကို ဖတ်နေချိန်မှာ သမီးက လေယာဉ်ပျံကြီးစီးပြီး ဟိုးအဝေးကိုသွားနေပြီ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သမီးအခု စီးနေတာ နွားလှည်းလိုလိုစက်အင်ဂျင်မကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကယ်စုပ်ပေါ်မှာပါ။ ကျေးလက်သဘာဝကို သမီး ချစ်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပကာသနနဲ့ စည်းစိမ်ဥစွာတွေကိုလည်းမမက်တော့ပါဘူးတစ်နေ့ကျရင် သမီး အဖေတို့ အမေတိုရှိရာအိမ်ကို ဆက်ဆက် ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။
သူနဲ့ကွဲသွားရင်ပေါ့။ အမေတို့ အဖေတို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်ဖို့လည်း သားသား မီးမီးလေးတွေ လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပြန်လာရင်ယူလာခဲ့ပါ့မယ်…!!ပုံ/ သမီးမိုက်ဘဝအမောများခဏပြေပျောက်ကြပါစေ….
ဖွဈရလေ ငါ့သမီးလေးရယျ(ခိုးရာလိုကျသှားတဲ့သမီးဖွဈသူရဲ့ စာကိုဖကျပီး အူပါတကျတယျ)
သို့ / ခဈြရပါသော အမေ နဲ့ အဖေ. သမီး ခိုးရာနောကျ လိုကျသှားပါပွီ။သမီးကို အဖနေဲ့အမတေို့ ပွုစုနရေမှာ ရှကျပွီတော့ အားနာလာလို့ပါ။အမတေို့ ဆငျပေးထားတဲ့ လကျစှပျ ဆှဲကွှိုး လကျကောကျ တှကေို မယူခငျြလို့ အိတျနဲ့ထညျ့ပွီး သမီးမှနျတငျခုံပျေါမှာတငျထားပွီးမှ သမီးတို့ စားဝတျနရေေး အဆငျမပွရေငျ အမတေို့ပဲ့ စိတျဆငျးရဲမှာ စိုးလို့ သမီးအကုနျယူသှားပါပွီ။
ATM card လေးလညျး ယူသှားတယျ အမသေိတယျမဟုတျလားအခုခတျေက လမျးခရီးမှာ ငှကေိုငျရငျ အန်တရာယျ မြားတယျလေ။ အသကျကို ဉာဏျစောငျ့ လို့ အမတေို့ပဲ သငျပေးခဲ့တာ သမီး မမဘေူ့း။ သမီး ခဈြသူကလညျး ရိုးရိုးသားသားပါ။ စိတျမပူပါနဲ့နျော။ ယောင်ျကြားလေး ဆိုတော့လညျး နညျးနညျးပါးပါးတော့ သောကျတတျစားတတျ တာပေါ့ အားကစားလညျး သူ ဝါသနာပါလို့ ဘောလုံးပှဲလညျး လောငျးတယျလေ။
မကောငျးတဲ့ မိနျးမတှနေဲ့လညျး သူ မရှုပျဘူးတဲ့။ ကောငျးတဲ့ မိနျးမတှနေဲ့ပဲ့ ရှုပျတာတဲ့။ ဘာပဲ့ဖွဈဖွဈ သမီးကို သူခဈြသလို သမီးကလညျး သူ့ကိုခဈြတယျ။သူက ကွငျနာယုယတတျပါတယျ။ ဂရုလညျးစိုကျတယျ။ ဟိုနကေ့ဆို သမီးပါးမှာ ခွငျတဈကောငျနားနလေို့သမီးကို ခွငျကိုကျမှာ စိုးရိမျပွီသူ့လကျနဲ့ ဖနျြးကနဲရိုကျပလိုကျတာ သှားနှဈခြောငျး ကြှတျသှားတယျ။
မိဘဆိုတာ သားသမီးကို စိတျဆိုးလညျး ခဏတဲ့ရှာဦးကြောငျးဆရာတျော ရှငျပညာသာမိ ပွောဖူးတယျ။ မိဘတှကေ မွေးမကျြနှာမွငျရငျ အရညျပြျောရောတဲ့။ ဒါကွောငျ့လညျး အမတေို့အဖတေို့မွေးမွဈတှေ ပှခြေီ့နိုငျအောငျ သမီးတို့ကွိုးစားမှာပါ။
အမတေို့ ဒီစာကို ဖတျနခြေိနျမှာ သမီးက လယောဉျပြံကွီးစီးပွီး ဟိုးအဝေးကိုသှားနပွေီ မထငျလိုကျပါနဲ့။ သမီးအခု စီးနတော နှားလှညျးလိုလိုစကျအငျဂငျြမကောငျးတဲ့ ဆိုငျကယျစုပျပျေါမှာပါ။ ကြေးလကျသဘာဝကို သမီး ခဈြတယျလေ။ ဒါကွောငျ့ ပကာသနနဲ့ စညျးစိမျဥစှာတှကေိုလညျးမမကျတော့ပါဘူးတဈနကေ့ရြငျ သမီး အဖတေို့ အမတေိုရှိရာအိမျကို ဆကျဆကျ ပွနျလာခဲ့ပါမယျ။
သူနဲ့ကှဲသှားရငျပေါ့။ အမတေို့ အဖတေို့ စိတျပွလေကျပြောကျ ဖွဈဖို့လညျး သားသား မီးမီးလေးတှေ လကျဆောငျအနနေဲ့ ပွနျလာရငျယူလာခဲ့ပါ့မယျ…!!ပုံ/ သမီးမိုကျဘဝအမောမြားခဏပွပြေောကျကွပါစေ….crd
Previous Article နှာရည်ယို၊နှာမွှန်၊နှာပိတ်(ထိပ်ကပ်နာ)ရောဂါအတွက်
Next Article ၀င်ကြည့်ရင်းမျက်ရည်ကြမိပါတယ် RIP ပါရဲဘော်လေးရေ ကောင်းရာဘုံဘ၀ရောက်ပါစေဗျာ (ရုပ်သံ)1